Ulonwabo: I-Island yakho yokuFumana (iGumbi eliStandard)
Ihotele ye-boutique kwisiqithi saseMaldivian sendawo. Iqabane lam uAnne kunye nam singabahambi abazimiseleyo ngokwethu kwaye senze indawo esinokuhlala kuyo.
Nangona sikwisiqithi sendawo, sizenzela isonka sethu esitsha, i-ayisikrimu, iipizza, njl.
Sikwalungiselela uhambo lwale ndawo ke nokuba yimidlalo yasemanzini, i-scuba diving, ukutsiba esiqithini okanye ukuloba, sinawo umva wakho!
IBliss Dhigurah yindlu yeendwendwe enamagumbi ali-15 kwisiqithi esihle saseDhigurah eMzantsi Ari Atoll. Silungile kuMmandla oKhuselweyo woLwandle lwaseMazantsi (i-SAMPA), elikhaya kookrebe, iimantas kunye nezinye izilwanyana ezinkulu. Eli lelinye lamagumbi ethu asemgangathweni.
Ukuhlonipha ezinye iindwendwe kunye nabasebenzi bethu konke esikucelayo. Indawo yokutyela ihlala ivulwa kude kube yi-10:30PM kodwa uninzi lwabantu lukhetha ukuyibiza ngobusuku ngaphambi koko kwaye baqale usuku kwangoko.
Sikwalungiselela uhambo lwale ndawo ke nokuba yimidlalo yasemanzini, i-scuba diving, ukutsiba esiqithini okanye ukuloba, sinawo umva wakho…
I-Dhigurah yindawo ethandwayo naphakathi kwabahlali. Ngokwenyani lithetha "isiqithi eside" kwaye idume ngonxweme lwesanti kwincam yesiqithi. Sikwanethamsanqa lokuba nendawo enemithi ngelixa uninzi lweziqithi ezihlala abantu baseMaldivian zihlala ezidolophini.
Ngokuqhelekileyo, uya kudibana no-Anne okanye mna. Ukuba asikho, kungenxa yokuba sihamba sifumana idosi yethu yokuhamba kunye ne-adventure :-)